Coronavirus: Talyaaniga oo tallaabooyin adag ku soo rogay gobollada qaar - BBC News Somali
Image caption Ciidammo ayaa roondo ku sameynaya waddooyinka Lombardy
Maamulka gobolka Lombardy ee dalka Talyaaniga oo ah meesha ugu daran ee uu ka dillaacay xanuunka Coronavirus ayaa soo saaray tallaabooyin adag oo wax looga qabanayo faafitaanka fayraska.
Shuruucdan cusub ayaa waxaa ka mid ah in cayaaraha iyo waxyaabaha kale ee uu xitaa qofku si shakhsi ah ugu sameynayo dibadda la joojiyo.
Tallaabadan ayaa imaaneysa iyadoo Talyaaniga laga soo sheegay ku dhawaad 800 oo dhimasho ah shalay, khasaaraha dhimashada coronavirus ee dalkaasi ayaa gaartay 4,825, waana tirada ugu badan marka loo eego meelaha kale ee uu ka dillaacay fayraska.
Lombardy waa gobolka ugu daran dalkaas ee uu fayrasku saameeyay, waxaana ku dhintay ilaa 3,095 oo qof.
Madaxweynaha gobolkaas Attilio Fontana ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray ku dhawaaqay tallaabooyinka cusub.
LoGanacsiyada ayaa loogu baaqay inay xiraan, marka laga reebo kuwa iibiya waxyaabaha aasaasiga ah. Goobaha dhismaha ayaa sidoo kale la joojiyay marka laga reebo dadka ka shaqeeya dhismaha isbitaallada, waddooyinka baabuurta iyo kuwa tareenka.
Dhammaan suuqyada furan ee toddobaadlaha ah ayaa sidoo kale la mamnuucay.
Lombardy ayaa waxaa saarnaa xayiraad tan iyo 8 March dowladda ayaana rajeyneysay inay halkaasi ka soo baxdo natiijo wanaagsan.
Maalintii shalay ahayd Ra`iisul Wasaaraha dalkaas Giuseppe Conte ayaa amray in la xiro dhammaan ganacsiyada aan muhiimka ahayn ee dalkaas. Si kastaba, ma uusan kala caddeyn kuwa ay yihiin ganacsiyadaas iyo kuwa muhiimka ah.
Dukaamada waaweyn, farmashiyeyaasha, xafiisyada boostooyinka iyo bankiyada ayaa furnaan doona sidoo kalena gaadiidka dadweynaha ayaa sii shaqeyn doona.
Mr Conte ayaa xaaladda ku tilmaamay inay tahay tii ugu darneyd ee soo marta dalkaas, kaddib dagaalladii waaweynaa ee dunida.
Inkastoo la soo rogay tallaabooyinkaas, haddana kiisaska cusub iyo dhimashada ayaa sii kordhayay.
Ilaa 220,000 oo kiis ayaa laga soo sheegay guud ahaan dunida, iyo 9,000 oo dhimasho ah
Maxaa ka dhacaya dunida inteeda kale?
Wasaaradda caafimaadka Spain ayaa shaacisay inay jirto koror dhimasho oo 32% ah iyadoo la xaqiijiyay in 1,326 ay u dhinteen fayraska, waana tiradii ugu badneyd ee gudaha Yurub marka laga yimaado Talyaaniga.
Shir jaraa`id oo uu xalay qabtay, ayuu Ra`iisul Wasaaraha Spain Pedro Sánchez wuxuu kaga digay in weli xaaladdu aysan fari ka qodneyn oo maalmihii adkaa ay soo socdaan.
Dowladda ayaa xayiraad ku soo rogtay 46 milyan oo qof kuwaasoo oo keliya loo oggolaaday inay guryahooda ka baxaan marka ay aadayaan shaqo muhiim ah, soo iibsanayaan cunto iyo sababo caafimaad.
Tiro hoggaamiyeyaasha caalamka ah iyo siyaasiyiin ayaa u sheegay muwaaddiniintooda inay ilaaliyaan shuruucda.
Ra`iisul Wasaare Boris Johnson ayaa ka digay in la buuxdhaafin doono Waaxda Adeegga Caafimaadka dalkaas ee NHS haddii aysan dadku joojin faafinta fayraska. Wuxuu dadka ugu baaqay inay ka qeyb qaataan dadaalka nafhurnimada ah ee looga hortagayo faafitaanka xanuunka.
Wasiirka Caafimaadka Faransiiska Olivier Véran ayaa cambaareeyay dadka ka soo horjeestay ku dhaqanka kala fogaanshaha bulshada, isaga oo ku tilmaamay inay yihiin "khatar" iyo "kuwo aan mas`uuliyad qaadi karin".
In ka badan 12,500 oo qof oo ku nool Faransiiska ayuu ku dhacay xanuunka coronavirus, iyadoo shalayna ay dhimashada gaartay 562 qof.
Dalka Mareykanka, Barasaabka New York Andrew Cuomo ayaa isagana cambaareeyay dhalinyarada uu sheegay inay amarka diideen isla markaana koox koox isugu soo baxaya.